चीन आइरन अक्साइड कालो 722/750 निर्माता र आपूर्तिकर्ता शेन्काई पिगमेन्ट
१. फेरोसोफेरिक अक्साइड एक सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको चुम्बकीय सामग्री हो। विशेष रूपमा बनाइएको शुद्ध फेरोजोफेरिक अक्साइड टेप र टेलीकम्युनिकेशन उपकरणहरू रेकर्ड गर्न कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक म्याग्नेटाइट फलाम बनाउनको लागि कच्चा माल हो।
प्राइमर र टपकोटहरू बनाउन प्रयोग गरियो।
यो धेरै गाह्रो छ र घर्षणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मोटर वाहन ब्रेकिंगको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ, जस्तै: ब्रेक प्याड, ब्रेक जुत्ता र यस्तै।
फेरोसोफेरिक अक्साइड चीनमा वेल्डिंग सामग्रीको क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त छ, इलेक्ट्रोडका लागि, तार उत्पादन अझै प्रारम्भिक चरणमा छ, बजार सम्भावना धेरै व्यापक छ।
फेरोसोफेरिक अक्साइड पनि रments्ग र पोलिश .3 को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उत्पादन प्याकिंग:
"SHENMING" ब्रान्डको सिंथेटिक पाउडर पिग्मेन्ट आयरन अक्साइड कालो 22२२ ले उच्च बजार प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ र उत्पादनहरू देशभरि राम्ररी बेचिन्छ।
यदि तपाइँ उच्च गुणवत्ता पाउडर पिगमेन्ट आयरन अक्साइड कालो 22२२ चीनबाट खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने, शिजियाजुU्ग शेन्सेइ पिग्मेन्ट फैक्टरी तपाईको उत्तम विकल्प हो।
व्यापार नाम IRON OXIDE BLACK
रंग सूचकांक रंगद्रव्य कालो ११ (7474747499)
CAS No./EC No १17१--61१-9 / २१5-२7777-
निर्दिष्टीकरण सामग्री (फे3O4) % ≥
Res 5२5 जालमा % ≤0.5
पानीमा घुलनशील नुन % ≤0.5
विशिष्ट गुरुत्व g / सेमी3 6.
अघिल्लो: फलामको अक्साइड पहेंलो 1११/3१/ / 20 २०
अर्को: आइरन अक्साइड हरियो 6060०5/835।